यी हुन् नेपालमा कोरोना संक्रमित बढ्नुका तीन खास कारण – Health Post Nepal
२०७७ जेठ ७ गते १८:०२
नेपालमा पहिलो पटक माघ ९ गते कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण भएको पुष्टि भएको थियो। त्यसको ८१ दिनपछि अर्थात् चैत ३० मा संक्रमित संख्या १२ जना पुग्यो।
त्यसैगरी १ सय १२ दिनपछि वैशाख ३१ मा २ सय १९ र १ सय १७ औं दिन जेठ ७ सम्म आइपुग्दा ४ सय २७ जना संक्रमित पुगिसकेका छन्।
पहिलो १ सय जना संक्रमित पुग्न कम्तीमा १ सय ६ दिन जति लागेको थियो। जब कि १० दिनकै बीचमा संक्रमित संख्या ४ नाघिसकेकाे छ।
दक्षिण एसियाकै ‘ट्रेन्ड’ हेर्ने हो भने संक्रमित संख्या १०० पुग्न भारतमा ४५ दिन लाग्यो र पाकिस्तानमा २० दिन लाग्यो। त्यस्तै माल्दिभ्समा ४८ दिन, श्रीलंकामा ५८ दिन, बंगलादेशमा २९ दिन र अफगानिस्तानमा ३३ दिन लागेको थियो। भुटानमा २१ जनामात्रै संक्रमित छन्। तीमध्ये ५ जना निको भइसकेका छन्।
यो ‘ट्रेन्ड’लाई केलाउँदा प्रस्टै देखिन्छ, संक्रमित संख्या १०० पुग्नमात्रै धेरै दिन लाग्छ। त्यसपछि बढ्ने गति एकदमै तीव्र छ।
यस्तो किन भएको ?
विज्ञहरूको अध्ययनले अहिले नेपालमा संक्रमित संख्या बढ्नुमा मुख्यतः तीन प्रमुख कारण छन्ः
परीक्षणको दायरा बढ्दै जानु
नेपालमा कोरोनाको परीक्षण माघ १४ बाट सुरु भएको थियो। ४४ दिनभित्र अर्थात (फागुन ३०) सम्म न्यून संख्यामा परीक्षण भएको थियो। त्यस अवधिमा कोरोना संक्रमण १ जनाभन्दा अरुलाई देखिएको थिएन। परीक्षण सुरु गरिएको दिनदेखि ४४ दिनभित्र हेर्दा ४ सय ५६ जनाको नमुना परीक्षण भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ।
७४ दिन (चैत ३०) सम्म ५ हजार १ सय ८४ जनाको नमुना परीक्षण भएको थियो भने १ सय ५ दिन (वैशाख ३१) सम्म २१ हजार ३ सय ४० जनाको पिसिआरमार्फत कोरोना परीक्षण भएको छ।
केही दिनयता नमुना परीक्षण हुँदै गएपछि संक्रमण संख्या बढ्दै गएको छ। परीक्षण सुरु भएको १ सय १२ दिन (जेठ ७ ) सम्म ३५ हजार ४ सय ९४ जनाको परीक्षण भएको छ।
परीक्षण संख्या बढेपछि स्वाभाविक रूपमा संक्रमित बढ्ने मुटुरोग विशेषज्ञ डा. ओममूर्ति अनिल बताउँछन्।
कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ समयमै भएन
नेपालमा कन्टयाक्ट ट्रेसिङ समयमा हुन नसकेको देखिन्छ। कुनै पनि व्यक्तिलाई कोरोनाको परीक्षण आउँदा रिपोर्टमा पोजेटिभ देखिएको छ भने रिपोर्ट आएको २४ देखि ४८ घण्टाभित्र संक्रमितको सम्पर्कमा रहेको पहिचान गरी क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ। तर, नेपालमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ समयमै हुन सकेको देखिँदैन।
कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ समयमा नै हुन नसक्दा संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आएका मानिसले संक्रमण फैलाइरहेको डा. अनिलको बुझाइ छ।
उनका अनुसार कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ रफ्तारमा हुन नसक्दा केस बढिरहेको छ। ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ रफ्तारमा नभएको कारण एक–अर्को व्यक्तिमा संक्रमण हुने जुन गति छ, त्यसलाई घटाउन सकेनौं,’ उनले भने, ‘जसका कारण समुदाय स्तरसम्म संक्रमण देखिइसकेको छ।’
बाहिरी देशको तथ्यांक हेर्दा एक कोरोना संक्रमित व्यक्तिले समग्रमा सरदरमा ३ व्यक्तिलाई सारेको तथ्यांक छ। तर, नेपालमा एक व्यक्तिले कतिलाई संक्रमण फैलाएको कुनै पत्ता लागेको छैन।
भारतबाट संक्रमित केस प्रवेश
भारतबाट अझै पनि कारोना संक्रमितहरू नेपाल प्रवेश गरिरहेका छन्। अहिलेसम्म अधिकांस नयाँ केस भारतबाट आएको पाइएको छ। लकडाउन भएको ५८ दिन बितिसक्दा पनि सीमानाकाबाट लुकिपिछी आउनेक्रम रोकिएको छैन।
विश्वमा कोरोनाको महामारीको टेन्ड हेर्ने हो भने ३० वटा केस फैलनका लागि १५ दिन देखि ३० सम्म लागेको पाइएको छ। तर, त्यसपछि संक्रमण दर ह्वातै बढेको देखिन्छ।
एक महिना पछिको समयमा १० देखि १ गुणा फैलिएको पाइएको डा. अनिल बताउँछन्।
नेपालमा पनि केही दिनयता केस बढिरहेको हेर्दा १०औं गुणा केस फैलिने संकेत गरेको उनको भनाइ छ।
संक्रमण बढ्नुको संकेत के हो?
डा. अनिलका अनुसार यो ‘भयावह’ संकेत हो।
अझै पनि आम नागरिक तथा स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोनाका बिरामी जटिल खालका हुँदैन भन्ने भ्रम पनि रहेको छ। नेपालमा देखिएका केसमा ८० प्रतिशत लक्षण नै देखिएको छैन। नेपालीमा इम्युनिटी पावरले गर्दा नै कोरोनाबाट मृत्युको जोखिम नहुने अझै विश्वास रहेको देखिन्छ।
भारतमा हेर्ने हो भने ५–६ सय केस पुगेपछि पहिलो मृत्यु भयो। ‘विभिन्न तत्वले गर्दा रोग नै पत्ता लागेको हुँदैन,’ डा. अनिल भन्छन्, ‘कोरोनाका कारणले मृत्यु भए पनि अन्य कारणले निष्कर्ष निकाल्नतर्फ लाग्छौं।’
हाल केस पत्ता लगाउन केही साताअघि सरकारले प्रोटोकलको निर्माण गरेको छ। जसले अन्य रोग लागेका मानिसलाई पनि कोरोना परीक्षण गर्न सकिने भएको छ।
नेपालमा भन्टिलेटरमा जानुपर्ने बिरामी हुँदैनन्। मानिसको मृत्यु हुँदैन भन्ने भ्रम अझै धेरै जनमानसमा रहेको छ। तर, कम्तीमा पनि ५ हजार केस देखिएपछि मात्र निष्कर्षमा पुग्न सकिने डा. अनिल बताउँछन्। ‘कति प्रतिशत लक्षणविहीन हुन्, कति प्रतिशतको मृत्यु हुन्छ भन्ने अहिले निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘निष्कर्षमा पुग्नका लागि कम्तीमा ५ हजार केस पुग्नुपर्छ।’